အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရှိတဲ့ ကလေးက Tsugaru Ben စကားကိုမပြောနိုင်ဘူး ? - JAPO Japanese News
ဂါ 13 Oct 2020, 17:55 ညနေ
ဒါဟာလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက် ပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရောဂါလက္ခဏာကို စိတ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။လက်ရှိတွင်၎င်းသည်အကြောင်းရင်းမသိရသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး
ဂျပန်တွင် ဒီရောဂါလက္ခဏာခံစားရတဲ့ လူနာဦးရေဟာ လျင်မြန်စွာတိုးပွားလာလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
အဓိပ္ပာယ်ကို မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ခက်ခဲသောစကားလုံးများကိုသုံးပြီးပြောတာတို့၊ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အရာကိုပဲ တစ်ဖက်သတ်ပြောပြီး တခြားသူတွေနဲ့စကားလက်ဆုံ အပြန်အလှန်မပြောနိုင်တာတို့လို့မျိုးတွေ ဖြစ်တာပါ။၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့် ကလေးအရွယ်မှာအများအားဖြင့် မြင်ရလေ့ရှိတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။သို့ပေမယ့်၊ ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရှိတဲ့ကလေးများက Tsugaru Ben ကိုမပြောကြဘူး ဆိုတဲ့အရာပါ။
Tsugaru Ben ဆိုတာက Tohoku ဒေသရှိ Aomori စီရင်စုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းနေရာတွင် ပြောဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပြီး အခြားဒေသများမှလူများသည် သူတို့ပြောသည့်စကားကို တော်တော်များများ နားမလည်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါတုန်းက Aomori စီရင်စုရှိ Tsugaru Ben ရဲ့ တက္ကစီငှားစီးတုန်းက ယာဉ်မောင်းကကျွန်တော့်ကိုပြောတဲ့စကားကို နားမလည်တုန်းကအကြောင်းကိုတော့ ပြန်ပြီးတော့မှတ်မိစေပါတယ်။
သို့ရာတွင်၊ တီဗီနှင့်ရေဒီယိုတို့တွင် စံသတ်မှတ်ထားသောစကားလုံးများစွာရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤဒေသရှိလူများသည် စံစကားများကိုလည်း နားလည်ပြီး၊ နားထောင်နေစဉ်မှာပဲ မိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ဤ “ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရှိသောကလေးများက Tsugaru Ben ကိုမပြောကြဘူး” ဆိုတဲ့ အရာကတော့ Aomori ‌ဒေသမှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအမှန်ပဲလို့ဆိုကြပါတယ်။
တိုကျိုမှကလေးများရဲ့ ၁၀၀% နီးပါးက Tsugaru Ben ကို စကားမပြောနိုင်ပါ။သို့သော် Tsugaru Ben ကို ပုံမှန်ဧရိယာမှာကိုပဲ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရှိသောကလေးများသည် Tsugaru Ben ကိုမပြောနိုင်ကြဘူးတဲ့။ရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဂျပန်တစ်ခွင်မှာလည်းအလားတူအဖြစ်အပျက်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရင် . . .အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာကလေးများ က ဒေသိယစကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့။ဒါအမှန်ပဲ။ဒါဟာ ထူးဆန်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ်ဒေတာအနေနှင့် ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းပြချက်ကို နောက်ဆုံးတော့မြင်ရပါပြီ။
မိသားစုတွေ၊ သင့်ပတ်၀န်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူများနှင့် ပုံမှန် စကားပြောပါက သဘာဝကျကျသူတို့ရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေရှိလာပြီးတော့ ဒေသသုံးစကားတွေကလည်း အခြေခံပြောတဲ့စကားအဖြစ် နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် TV နှင့်ဂိမ်းများအတွက်သာအသုံးပြုထားသော စံစကား standard language ကတော့ ဂျပန်စာကို သင်ယူရန်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒေသိယစကားတွေကို ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တာ ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တီဗွီနှင့်ဂိမ်းများမှာက အတော်လေးခက်ခဲတဲ့စကားလုံးများကိုအသုံးပြုကြတာများပြီး ဂိမ်းများနှင့် anime များမှာသုံးတဲ့ စကားလုံးတွေဟာတော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ အထူးသဖြင့်မှန်ပါတယ်။တီဗွီနဲ့ဂိမ်းတွေကမကောင်းဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အမြဲမဟုတ်ရင်တောင် မကြာမကြာ လူတိုင်းနဲ့ အတော်အသင့်စကားပြောဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သင့်မှာ Best Friend ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ?
အထီးကျန်သေဆုံးခြင်းရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ အကြောင်း
ဒေသိယစကားပြောနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် !